“အတွေးစလေးတွေ”: ကိုင်း…နှောလိုက်ဦးမယ် နတ်သံ . . .
Posted by Han Kyi at 9:38:00 am
ဆရာဟန်ရယ်... ဖြစ်သမျှအကြောင်း နတ်သံနှောသွားတာ အတော့်ကို ရယ်ရသဗျိုး... နက်ဘုတ်နဲ့ ဒက်စတော့ ကီးဘုတ်ကြီးနဲ့ ဖယောင်းတိုင်းထွန်းပြီး ရေးနေတဲ့ ဆရာဟန့် ပုံစံကို အတိုင်းသားကို မြင်ရသဗျိုး... မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ... များမကြာခင် အဆင်ပြေပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
သူကြီးသား ပေါက်ကြီးမဟုတ်ဘဲ နတ်ဒိုးနဲ့ ထွက်လာပါရောလား ဆရာကြည်။
၀ါကျွတ်ရင်တော့ ပို့စ်တွေ တစ်ရွှတ်ရွှတ် တက်လာတော့မယ် ထင်ပါ့။
ခပ်သွက်သွက် စာလေးတွေ မဖတ်ရတာ ကြာတော့ လွမ်းတော့လွမ်းမိသား။
ဒါနဲ့ ပေါက်ကြီးကိုလဲ ပစ်မထားနဲ့ဦး။
မဒမ်ကြည်က ဆရာ့ကို သနားလို့လား ဒါမှမဟုတ် ကီးပက်ကြီးရောက်လာရင် စာရေးကုန်းရိုက်နေမှာ ကြိုမြင်ယောင်ပြီး ကီးပက်ကြီးမြန်မြန်ရောက်လာလေ ပိုကောင်းလေ. ဒါမှ မျက်စိနှောက် နားနှောက် သက်သာမှာဆိုပြီး ကြိုတင်စီမံချက်နဲ့များလားတော့ မသိ.. ဆရာ့ကီးပက်ရရေးတော့ အတော်ကူညီပေးရှာသကိုး။း))
ဆရာကိုဟန်ကြည်တစ်ယောက် ပျောက်လှချည်လားလို့ ကွမ်းတံတွေးနဲ့ သင်္ကြန်ကျခံလိုက်ရတဲ့ ကီးပက်ကြောင့်ကိုး။ ကီးပက်ဒုက္ခလည်း မသေးပါလားနော်။ သုံးလေးလဆိုပေမယ့် အလွမ်းပင်လေးတောင် အသီးတွေသီးတော့မလို့။ ဟုတ်ပါ့၊ ဆွမ်းခံရတာ ကိုယ်ချက်တာလောက်တော့ ဘယ်ဝပါ့မလဲတဲ့။ ဘုန်းဘုန်းတောက်ရန်ကုန်မှာ စရောက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင် တစ်ရက်တစ်လေ ဆွမ်းမ၀ခဲ့ဘူး။ ဆွမ်းမ၀ရရင် အီးမှန်ထားတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ နေမထိထိုင်မသာကို ဖြစ်လို့။ (ဆရာ့လေသံ)။ ဟာဟ (သူကြီးမင်းလေသံ)
ဆရာလည်းပျောက်လိုက်တာလို့ ထင်နေတာ၊ ဒီလိုဒီလိုတွေကြောင့်ကိုး။
ဒီမှာလည်း ကော်ဖီသောက်ရင်မှောက်ကျလို့ keypad တပြုံလုံးလဲလိုက်ရပါရောလား။ လိုမယ့်ပစ္စည်းလေးတောင်ရှာပေးချင်လာပြီ။ ဒီဘက်က ပို့ရတာကလည်းမလွယ်လို့သာ။
ဒီအကြောင်းတွေကြောင့် ဆရာတစ်ယောက်ပျောက်နေတာကို ။အချိန်ရရင် ပေါက်ကြီးဇာတ်လေးလဲ ဆက်ပါအုံး
ဆရာဟန်ရဲ့ ပျောက်ချက်ကောင်းပုံပို့စ်အသစ်စက်စက်ကလေးကိုလာရောက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ် ဆရာ့ရဲ့နတ်ဒိုးနှောသံလေး မကြားရတာကြာပါ့ရောလား..
စဉ်းစားနေတာ သို့လော သို့လောပါပဲဆရာ
အကို ပျောက်နေတာ ဒါကြောင့်ကိုး...:)
ဖြစ်ရမယ် အစ်ကိုဟန်ကြည့်ရေ ..။
ကီးပတ်အသစ် အမြန်ရပါစေ .. ဒါမှမဟုတ် နတ်ဘွတ်အသစ်ဝယ်ပေးတဲ့လူ အမြန်တွေ့ပါစေး)
ပေါ်တော်မူ ပါပေါ့လား ဆရာ.....
နတ်သံနှော ပြောသွားလို့ ရယ်မောလို့ကို မဆုံးဘူးဗျာ
ပိုစ့်တွေ မဖတ်ရတာ အတော့်ကို ကြာသွားပြီမို့
အမြန်သာ အဆင်ပြေပါစေ ဆရာ.....။
အဲဒီတော့ ကွမ်းပြတ်ပြီလား ဆြာဟန် :)
သီတင်းကျွတ်မှ ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ ဦးဟန်ကြည်များ မင်္ဂလာဆောင်တော့မလား မှတ်တာ
(မဒမ်ကြည် ဗိုက်ခေါက်ဆွဲလိမ်ရင်တော့ ကိုယ့်ဖာကိုယ်ရှင်းနော် ) :P
ကြုံရ ဆုံရ ဒုက္ခတွေကလည်း များလှပါလား ဆရာ..
ကီးပက်ကြီးရလာရင်တောင် မီးပျက်နေရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဦးမယ်...
ခုနေ ရောက်မလာသေးတာ ခပ်ကောင်းကောင်းထင်ပါရဲ့ :)
စာဖတ်ရင်း မျက်လုံးထဲ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ဇီးရွှက်လောက်မျက်နှာလေး မြင်မြင်လာတယ်..
မြန်မြန်လေး အဆင်ပြေပါစေ ဒါမှ ပို့စ်အသစ်လေးတွေ များများ ဖတ်ရမှာမို့ အားမလျှော့ပဲ ရှာကြည့်ပါဦး ဆရာရေ..
ဆြာဟန်ရဲ့နတ်ဒိုးလေးကို တပြုံးပြုံးနဲ့ဖတ်သွားကြောင်းဗျား..နက်ဘုတ်မှာ ဒက်စ်တော့ ကီးပတ်အကြီးကြီး တပ်ကာ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီး တဂျောင်းဂျောင်းရိုက်နေတဲ့ ဆြာဟန်ပုံစံကို မြင်ယောင်ပြီး ပြုံးမိစေးတယ်..ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ကြုံရဆုံရ ဘုံဘဝတွေပေါ့..ကီးပတ်အသစ်ကြီး ရှာပုံတော်ဖွင့်ပုံ ရေးဦးနော် ဆြာဟန်..
အသစ်တင်ပြီလားလို့ ခဏခဏလာချောင်းဖြစ်ပါတယ် ခုမှပဲ အကြောင်းရင်းသိရတော့တယ်...
buy tramadol cod overnight buy tramadol hcl 50mg - buy tramadol overnight with mastercard
viagra online pharmacy buy viagra for women online - buy genuine viagra no prescription
order tramadol tramadol 50 mg 180 tabs - tramadol no prescription legal
cheap soma aura soma online shop - soma muscle relaxer street value
soma muscle discount somatropin - what drug class is soma
soma price generic soma compound - soma 350 pills
buy soma 350mg where to buy soma online - cheap soma online no prescription
buy soma online cheap soma apartments san francisco - buy somatropin south africa
8 February 2013 at 00:11
buy generic soma soma restaurant san francisco - radiohead soma san diego
generic cialis buy cialis viagra levitra - generic cialis us pharmacy
soma carisoprodol soma 150 pills - buy somatropin growth hormone
buy tramadol online reviews where can i buy tramadol for my dog - tramadol drug interactions
xanax withoutaperscription xanax dosage extreme anxiety - xanax withdrawal loss of appetite
buy cialis from canada cialis daily and bph - cialis everyday price
buy cheap tramadol cheap tramadol for dogs - buy tramadol online nz
buy tramadol buy 200 mg tramadol online - zaldiar tramadol hcl
http://landvoicelearning.com/#97734 tramadol for dogs benadryl - buy tramadol overnight no prescription
buy klonopin online klonopin withdrawal cold turkey - klonopin withdrawal and seizures
12, [url=http://www.solarcraftaudio.com/]neurontin sale[/url] - cheap gabapentin - order gabapentin http://www.solarcraftaudio.com/ .